Madaxweyne Mustafe Cagjar oo sheegay in maamulkiisa uusan waxba ka qaban karin sicir bararka | Dhexnimo Media
Home Wararka Madaxweyne Mustafe Cagjar oo sheegay in maamulkiisa uusan waxba ka qaban karin...
Madaxweyne Mustafe Cagjar oo sheegay in maamulkiisa uusan waxba ka qaban karin sicir bararka
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafe Cagjar, ayaa sheegay in maamulkiisu uusan waxba ka qaban karin sicir bararka raashinka iyo dhibaatada ka taagan sarifka dollarka.
Waxa uu tusaale u soo qaatay kor u kaca ku yimid qiimaha cuntada adduunka ee kor u kacaya taas oo ay sabab u tahay duullaankii Ruushka ee Ukraine.
Mustafa Cagjar ayaa iftiimiyay in Bangiga dhexe ee Itoobiya iyo dowladda dhexe ay mas’uul ka yihiin xallinta sicir bararka dollarka.
“Mar haddii aynaan wax ka qaban karin Sicir-bararka Caalamka iyo Sicir-bararka Doollarka, waxa keliya ee ay Xukuumaddu wax ka qaban kartaa waa in ay wax ka qabato Saamaynta Sicir-bararka oo ah cunto-yarida, dadka danyarta ah ayaa gaajo u dhimanaya dhaqaale-xumada jirta awgeed.
Madaxweyne Mustafe Cagjar waxa uu intaas ku daray in haddii loo baahdo la xiri doono bangiyda ku yaalla magaalada Wajaale ee ku taalla xuduudka gobolka Soomaalida iyo Somaliland, si wax looga qabto sicir-bararka.
Waxaa uu soo jeediyay xal lagu yareynayo saameynta sicir bararka oo ay ka mid yihiin in la ballaariyo barnaamijka quudinta dadka danyarta ah iyo in deeq bixiyayaasha caalamiga ah lagu qanciyo in tirada dadka u baahan cunnada ay ku soo bateen gayiga Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu xusay in lacago badan ay soo galeen gobolka si dadka loo siiyo maadaama qiimihii raashinka uu sare u kacay.
Sicir bararka ayaa mudooyinkii u danbeeyay aad uga soo cusboonaaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, kaasoo saameeyay dadka danyarta ah oo markii horeba la tacaalayay nolol maalmeedkooda. Sicir bararka ayaa noqday mid maanta cid kasta oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida saameyn weyn ku yeeshay.
Previous articleDowladda Sacuudiga oo xayiraad kusoo rogtay Soomaaliya
Next articleMadaxweynihii hore ee dalka Gambia oo la Maxkamadeynayo